ဆုကြေးပေးရုံတင်မကပဲ တရုတ်ပြည်ထိ ပြိုင်စရိတ်ပါပေးမယ့် PUGB ပြိုင်ပွဲကြီး – Gaming Kwee
🇲🇲🇲🇲 မင်္ဂလာပါ မြန်မာ PUBG pro တို့ရေ…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး International PUBG E sport Tournament ကိုတက်လှမ်းနိုင်မယ့် PUBG event ဖြစ်တဲ့ “Geforce Cup Myanmar” ကို NVIDIA GeForce Myanmar နှင့် Colorful Technology တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျင်းပပေးသွားမှာတဲ့။
ပထမရရှိတဲ့ အသင်းဟာဆိုရင် တစ်ဦးစီကိုကာလတန်ဖိုး ၇ သိန်းထက်မနည်းတဲ့ဆုတွေကိုရရှိမယ့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ ကျင်းပမယ့် Colorful Gaming Union (CGU) မှာ Thailand, Philippine, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore တို့က တက်လာမယ့် ကိုယ်စားပြု အသင်းတွေနဲ့နေစားရိတ် သွားစရိတ်ငြိမ်း sponsor နဲ့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကိုရရှိမှာတဲ့ဗျာ…။
ကဲ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…
🔥🇲🇲TIME TO POWER UP for MYANMR🇲🇲🔥
Online Group Stage တွေကို December 1 -2 မှာကျင်းပပြီး
Main Event Lan tournament ကိုတော့ December 8-9 မှာ ကျင်းပပေးသွားပါမယ်။
Event detail တွေကိုလည်းမကြာမီအသေးစိတ်ကြေငြာပေးသွားပါမယ်နော်။
ဒီ event လေးကို Global Maven Association က နေ Live Broadcast လုပ်ပေးသွားပါမယ်။ ပြီးတော့ Media အချို့ကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပေးထားပါတယ်။
🏆🏆🏆ပထမဆု – အသင်းအနေနဲ့ ၆ သိန်း ကျပ် ငွေသား ရရှိပါမယ်။ အသင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီကို Colorful iGame GTX 1060 Vulcan U 6gb (တန်ဖိုး ၅၀၀၀၀၀ ကျပ်ရှိ) တစ်ကဒ်စီချီးမြှင့်သွားပါမယ်။ ပြီးရင် တစ်ယောက်ချင်းစီကို Tech Ace ရဲ့ ၁ သိန်းတန် gift voucher ကိုချီးမြှင့်သွားပါမယ်။
🏆🏆ဒုတိယဆု – အသင်းအနေနဲ့ ၃ သိန်းကျပ် ငွေသားရရှိပါမယ်။ Tech Ace ရဲ့ ငါးသောင်းတန် gift voucher ကို ချီးမြှင့်သွားပါမယ်။
🏆တတိယဆု – အသင်းအနေနဲ့ ၁ သိန်းခွဲ ငွေသားရရှိပါမယ်. Tech Ace ရဲ့ နှစ်သောင်းခွဲကျပ်တန် gift voucher ကို ချီးမြှင့်သွားပါမယ်။
📢📢 မြန်မာအနေနဲ့Internation Event မှာပါဝင်နိုင်ဖို့သင့်အနေနဲ့လည်း သင့်အနားမှာရှိတဲ့ PUBG player တွေကို အသိပေးပြီး share ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
🇲🇲🇲🇲 Hello Myanmar PUBG pro players,
We are bringing the very first PUBG event in Myanmar called GeForce Cup Myanmar in collabration with NVIDIA GeForce Myanmar and Colorful Technology .
The online group stage event will start on December 1 –2and main event will begin after it on December 8 –9. We will annouce the exact details for the event soon . During the event , Global Maven Association will be participating as the main live broadcaster .
🥇 For the event winner 🥇
🏆🏆 600,000 ks asateam and Colorful iGame GTX 1060 Vulcan U 6G and Tech Ace Gift Voucher 100,000 ks for each team members 🏆🏆
🥈 For the first runner-up 🥈
🏆🏆 300,000 ks asateam and Tech Ace Gift Voucher 50,000 ks for each team members 🏆🏆
🥉 For the second runner-up 🥉
🏆🏆 150,000 ks asateam and Tech Ace Gift Voucher 25,000 ks for each team members 🏆🏆
After the event , the event winner team will be selected asaCountry Qualifier to represent Myanmar 🇲🇲🇲🇲 and send to China to participate in the final event which will be hosted by Colorful called Colorful Gaming Union (CGU) in China and have to compete with the qualifier teams from Thailand , Philippine , Vietnam , Indonesia , Malaysia , Singapore and Vietnam .
Please let your fellow pubg players know by sharing this content to them, so that they can represent Myanmar in International Esport Community.
Previous PostBEST MOBILE GAME အတွက် Vote လို့ရနေပါပြီနော်…